Ignatius Room | | Samsung, Xiaomi
Raha vantany vao nanolotra ny tolo-kevitr'izy ireo momba ny finday avo lenta i Xiaomi, dia voatery manao a fampitahana eo amin'ny Xiaomi Mi Mix Fold sy ny Galaxy Z Fold 2, ny maodely farany indrindra an'ny finday avo lenta an'ny orinasa Koreana ary avy amin'izany no misotro ny maodely Xiaomi.
Samsung (Galaxy Fold) ary Huawei (Mate X) natolotra tamin'ny fotoana iray ihany tamin'ny fiandohan'ny taona 2019, andro iray misaraka, ireo finday avo lenta voalohany nahatratra ny tsena, na dia amin'ny tranga maodely Huawei aza dia tsy nandao an'i Sina izy tamin'ny farany. Na dia notsikeraina aza ny endrika ampiasain'i Samsung (boky-in-type) ary deraina ny an'i Huawei, farany dia marina ny Samsung ary izy no nitarika ny làlana. Ny taranaka faharoa amin'ny Galaxy Fold, Galaxy Z aforeto 2 dia natomboka tamin'ny Aogositra 2020.
Ary rehefa miteny aho fa marina ny azy, dia satria ny filamatra tsara amin'ny finday avo lenta dia ny aforitra ao anaty, toy ny boky, izany hoeNy lamba aforitra dia voaro ao anaty amin'ny fotoana rehetra, tsy toa ny Mate X izay nanodidina ny ivelany ivelany an'ilay fitaovana ny efijery ary rehefa niforitra dia lasa efijery ivelany ny iray tamin'ireo tarehy.
Samsung, rehefa mampiasa endrika endrika toy ny boky, nampihatra efijery iray ivelany, fisehoana mahaleo tena iray manontolo, ny habeny dia nitombo be tamin'ny taranaka faharoa natomboka tamin'ny taon-dasa.
Ary rehefa miteny aho fa marina ny Samsung, dia nolazaiko ihany koa, satria roa taona lasa izay, ny orinasa Xiaomi nandefa horonantsary izay ahitanao a smartphone miaraka amin'ny efijery mivalona Miaraka amina endrika mitovy amin'ny Mate X an'i Huawei, na izany aza, rehefa naseho tamin'ny fomba ofisialy ity smartphone ity dia nampiasa famolavolana boky mitovy amin'ny Galaxy Z Fold izy.
1.4 Refy sy lanjany
1.9 Vidiny sy misy
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, ny Xiaomi's Mi Mix Fold dia mampiasa endrika mitovy amin'ny Samsung's Galaxy Fold (Nadikan'izy ireo mihitsy aza ny sary fampiroboroboana), famolavolana mihidy anaty mba hiarovana ny efijery mivalona ary mampiditra efijery amin'ny lafiny iray ahafahantsika mifandray amin'ny finday avo lenta amin'ny fotoana rehetra nefa tsy mila manokatra azy io hatrany.
Amin'ny tranga roa, tery loatra ny efijery ivelany tia afaka mankafy sarimihetsika na atiny multimedia. Amin'io lafiny io dia tery kokoa ny efijery an'i Xiaomi, ka raha manantena fiovana ianao amin'ity lafiny ity dia tsy ho hitanao ao amin'ny Xiaomi izany.
Iray amin'ireo iray hafa, hitantsika amin'ny efijery anatiny izy io. Raha ny tahan'ny famelombelona ny Efijery anatiny Xiaomi, karazana AMOLED dia 60 Hz, mahatratra 90 Hz amin'ny efijery ivelany.
Ao amin'ny Galaxy Fold 2 dia ny mifanohitra amin'izay no izy, satria ny efijery ivelany mahatratra 120 Hz, dia karazana AMOLED ary ny efijery ivelany dia napetraka amin'ny 60 Hz ho tahan'ny famelombelona.
Ny efijery anatiny an'ny Mi Mix Fold dia 8,01 santimetatra amin'ny 7,5 santimetatra an'ny maodely Samsung. Ny efijery ivelany, amin'ny tranga maodely Xiaomi, dia 6,52 santimetatra amin'ny 6,2 santimetatra amin'ny Fold 2.
Ny Galaxy Fold 2 dia natolotra tamin'ny Aogositra 2020 raha ny Mi Mix Fold kosa natolotra tamin'ny martsa 2021 (7 volana taty aoriana). Io tsy fitoviana io dia namela ny orinasa koreana Ampiasao ny processeur matanjaka indrindra an'i Qualcomm ankehitriny, ny Snapdragon 888 miaraka amina safidy fitadidy RAM hafa ho toerana fitahirizana.
Ny Galaxy Z Fold 2, dia tantanan'ny Qualcomm's Snapdragon 865+ dia manana tahiry 256GB sy RAM 12GB. Samsung dia manome maodely iray fotsiny an'ity fitaovana ity, raha Xiaomi any Shina kosa dia manome karazana RAM sy fitehirizana 3 isan-karazany.
Ireo modely roa ireo dia mifanaraka amin'ny tamba-jotra 5G, mampiditra Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ary NFC izy ireo. Ny fiarovana dia omen'ny a sensor sensor misy ny rantsantanana hita amin'ny iray amin'ireo sisiny ny fitaovana.
Refy sy lanjany
Raha toa ka efa lehibe ny refin'ny telefaona aforeto, Ny modely Xiaomi dia tsy nanatsara azy, satria tsy vitan'ny hoe malalaka kokoa io, fa mavesatra kokoa koa.
Galaxy Z aforeto 2 X X 159.2 68 16.8 MG X X 159.2 128.2 6.9 MG Gramin'ny 282
Xiaomi Mi Mix Fold X X 173.27 69.8 17.2 MG X X 173.27 133.38 7.62 MG Gramin'ny 317
El Ny Max Fold dia mampiditra batterie 5.020 mAh ary manohana haingana hatramin'ny 67W izy io. Snisafidy bateria 4.500 mAh i amsung mifanaraka amin'ny famahanana haingana hatramin'ny 45W.
Xiaomi dia miloka mafy amin'ny fakan-tsarin'ny Mi Mix Fold miaraka amin'ny a 108 MP-masolavitra lehibe, solomaso telephoto 8 MP misy zoom optika 3x, zoro 13 MP malalaka ary sensor makro 8 MP. Izy io dia afaka manoratra horonantsary amin'ny kalitao 8K.
Ireo lantiro rehetra natolotry ny Samsung Z Fold 2 MP 12 (solomaso lehibe, zoro malalaka ary zoro somary malalaka) ary aza avela hanoratra horonantsary amin'ny 8K. Mazava fa ny fanatsarana rehetra izay Galaxy s21 ultra Izy ireo dia hampiharina ao amin'ny Galaxy Z Fold 3 izay asehon'ny orinasa Koreana amin'ny tapaky ny taona amin'ity taona ity.
Rehefa manokatra ny Mi Mix Fold isika dia gaga tsy mahita fakantsary selfie, ka ny anoloana manontolo dia efijery iray, tsy misy santionany. Raha te-hanao selfie isika dia tsy maintsy ataontsika amin'ny finday avo lenta sy ny sensor 20 MP azy io.
Samsung dia manome fakan-tsary mialoha ho antsika ao anatiny, mba hahafahanay mampiasa finday avo lenta amin'ny kaonferansa video, fakantsary izay hitantsika eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny efijery sy izay manampy ny fiasa hinge izay mamela antsika hametraka ny antsasaky ny Aforitra hametraka azy eo amin'ny faritra fisaka.
Ireo mpanamboatra roa ireo dia manolotra vahaolana multitasking mahomby amin'ny telefaona finday, na dia eo aza ny Xiaomi ny smartphone dia tantanan'ny Android 10 raha ny Galaxy Z Fold 2 kosa vao nohavaozina tamin'ny Android 11.
Vahaolana mahaliana izay omen'i Xiaomi antsika ny mety ovay amin'ny birao iray ilay interface smartphone, na dia eo amin'ny efijery kely toy izany aza dia tsy isalasalana fa afaka mahazo tombony betsaka amin'izany ianao.
Amin'io lafiny io, Samsung dia manolotra antsika DeX, ny vahaolana pAhafahanao mifandray amin'ny efijery lehibe kokoa tsy misy tariby amin'ny PC miaraka amin'ny Windows na Samsung TV ary miasa mivantana avy amin'ny smartphone
Samsung ihany no manolotra mpandahateny roa, iray amin'ny lafiny roa amin'ny smartphone, na izany aza, Xiaomi lasa lehibe ary nampihatra 4, roa amin'ny lafiny roa, Ka rehefa mankafy ny filma dia hahita kalitaon'ny feo avo kokoa isika amin'ny maodely Xiaomi.
haman / kardon dia orinasa ao ambadiky ny fanamafisam-peo, orinasa iray an'ny Samsung 5 taona lasa.
Ny maodely ara-toekarena indrindra eo amin'ny sehatra Xiaomi Mi Fold, RAM 12 GB ary fitehirizana 256 GB, mitentina RMB 9.999, eo ho eo 1.3000 euros Amin'ny fanovana. Izay tsy maintsy ampidirintsika hetra raha amidy any ivelan'i Chine ihany amin'ny farany, ka ny vidiny dia azo apetraka amin'ny 1.500 na 1.600 euro ho an'ny maodely miaraka amin'ny RAM 12 GB sy fitehirizana 256 GB.
Ny kinova miaraka amin'i RAM 12 GB sy fitehirizana 512 GB 10.999 RMB ny vidiny, 1430 euro hanovana, raha ny kinova miaraka amin'i RAM 16 GB sy fitehirizana 512 GB mijoro amin'ny RMB 12.999, 1.690 euro hanovana.
Hatramin'izao dia afaka mahita ny Galaxy Z Aforeto 2 amin'ny 1.200 euro any Amazon, ambany lavitra ny 2.000 Euros ny vidin'ny fandefasana azy, vidiny mihoatra ny mahaliana ho an'ny zavatra rehetra atolotray antsika.
Amin'izao fotoana izao avy amin'i Xiaomi dia tsy nanambara ny daty fandefasana ny Mi Mix Fold izy ireo ivelan'i Sina, ka azo inoana fa tsy handao an'i Azia ity taranaka voalohany ity.
Niasa mivantana i Xiaomi inspiring amin'ny Galaxy Z Fold 2 ary fanatsarana ny sasany amin'ireo fiasa izay, noho ny olan'ny habakabaka dia tsy nampiharina.
Azo inoana fa ny andiany fahatelo amin'ny finday avo lenta azo raisina avy amin'ny Samsung sVahao ny tsy fitoviana na amin'ny fakantsary na amin'ny feo, ireo teboka roa handresen'ny maodely Xiaomi betsaka.
Tao amin'ny Androidsis, efa imbetsaka izahay no niresaka momba ny tsaho milaza fa mianatra momba ny ahoana i Samsung demokratika ny finday avo lenta, ary azo inoana fa nandritra ity taona ity, mamoaka kinova malemy, amin'ny vidiny ambany lavitra noho ny 2.000 Euros izay lanin'ny Galaxy Fold 2 vao tonga teny an-tsena.
Azontsika atao izao ny mividy ny Galaxy Z Fold 2 amin'ny vidiny 1.699 euro amin'ny tranokala Samsung na mankanesa any Amazon, izay ahitanay azy mihoatra ny 1.200 euro, araka ny nolazaiko etsy ambony.
La Galaxy Z Fold 3 fahatelo Azo inoana fa havoaka amin'ny tapaky ny volana aogositra, ka raha mikasa hividy finday avo lenta ianao dia azonao atao ny miandry volana vitsivitsy handraisan-tsoa amin'izany. Na dia amin'ny vidin'ny Galaxy Z Fold 2 aza, izaho manokana dia tsy hieritreritra be momba izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Xiaomi Mi Mix Aforeto vs Galaxy Z Aforeto 2